Ungayenza kanjani iphrinta yakho ye-3D ngokushesha okukhulu ngaphandle kokulahlekelwa ikhwalithi yokuphrinta | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Uma wake wabona umsebenzi wephrinta we-3D noma wacabanga ngokuthola umshuwalense enye yezithiyo zokungena obhekane nayo isivinini abasebenza ngaso. Ngikusho lokhu njengoba lesi kuyisici, okungenani okwamanje, ivimbela lolu hlobo lobuchwepheshe ukuthi lwamukelwe ngokushesha okukhulu.
Ngalokhu engqondweni, namuhla ngifuna ukukhuluma nawe ngesibuyekezo esisha lapho abadali baso behlose ukuxazulula izikhalazo eziningi bonke abakhiqizi abavame ukubeka ngaphambi kokubheja kulolu hlobo lobuchwepheshe kwazise leli qembu labanjiniyela baseMichigan likwazile ukuthuthukisa i-algorithm entsha ekwazi ukuphinda kabili isivinini sokuphrinta se-3D sanoma yimuphi umshini.
Ngenxa yale firmware entsha, isivinini sephrinta yakho ye-3D sizokwandiswa kakhulu
Mhlawumbe ingxenye ethakazelisa kakhulu yalesi sihloko sonke ukuthi, ngokufaka lesi sibuyekezo, umsebenzisi uzomane aphrinte ku-3D ngendlela eshesha kakhulu ngaphandle kokuhlushwa yiziphazamiso ebesinazo kuze kube manje, cishe konke kuhlotshaniswa nokuthile okulula njengokuthi, lapho iya ngokushesha Ikhwalithi yokuphrinta ye-3D yehle kakhulu.
Njengoba sekuveziwe, ngokusobala, ngoba leli qembu lonjiniyela lizamile ukwenza iphrinta ye-3D engabizi isebenze ngokushesha okukhulu. Inkinga yalokhu ukuthi, ngenxa yokuthi ibingeyona eyekhwalithi ephezulu kakhulu, ibisebenzisa izingxenye ezilula kakhulu nezishintsha kalula kunezinye izinhlobo, into ekugcineni ehumushela kwimodeli ethi, ngokwandisa ijubane okungenani, iqale ukuba nayo ukunyakaza, okubangela ikhwalithi yokuphrinta ibi kakhulu.
Le yimbewu ekugcineni eholele ekufuneni ukuthuthukisa i-firmware yokunciphisa ukudlidliza le phrinta ye-3D ukuholela ku-algorithm ekwazi ukumodela amandla ephrinta ye-3D ngendlela yokuthi ikwazi lungisa ukulawula kwephrinta ngaleyo ndlela unciphise konke ukudlidliza elikukhiqizayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » Ungayenza kanjani iphrinta yakho ye-3D ngokushesha okukhulu ngaphandle kokulahlekelwa ikhwalithi yokuphrinta
I-Wand Pi 8M, ehlukile kune-Raspberry Pi eneprosesa ye-Freescale
Iziphesheli zeBlackFriday ku-Electronics, 3D Printers kanye nezinye izinto zeHardware